Mayelana NATHI - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Thina BricMaker ngobungcweti ekwenzeni ubumba (sintered) imishini yokwakha izitini, i-R & D, ikilina nesisombululo sezitshalo zezitini ezizenzakalelayo.
I-BricMaker ihlanganisa amahektare angaphezu kwe-10, inamamitha ayisikwele angaphezu kuka-30,000 wokusebenzela wokukhiqiza wanamuhla, ngokutshalwa kwezimali okuphelele kwe-USD 30 million, kanye nabasebenzi abacishe babe ngama-200 okubandakanya iqembu labachwepheshe abangama-90 nonjiniyela.
Eminyakeni eyi-10 yakamuva, iBricMaker yenze utshalomali olukhulu lwezinto zokwakha izitini i-R & D, yamukela ubuchwepheshe bokukhiqiza obusezingeni eliphakeme kanye nemishini yamathuluzi, inikeze isixazululo esiphelele sesitshalo sezitini ngezinto zokuhluza ezingahloliwe, ukuklanywa kobunjiniyela bokukhiqiza, ukuklama komhubhe, isisombululo sokwakha, ukufakwa kwezinto zokusebenza & ukuthumela, ukuqeqeshwa kobuchwepheshe obuchwepheshe njll. Sinikeza ukusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe kwamabhizinisi amaningi wezitini ekhaya nakwamanye amazwe.
IBricMaker ngonyaka ka-2008 iphasise i-ISO9001 Quality Management System, i-OHSAS18001 Occupational Health & Safety Management System, futhi yazuza izihlonipho ze- "Corporate Credit Evaluation of AAA Credit Enterprise", "China Brick Industry Association Vice President we-Sixth Unit", "Wall Materials (sintering) ) Izinsiza kusebenza ezikhiqiza amabhizinisi aphezulu ayishumi "," Ibhizinisi Eliphambili Lezinto Zokwakha Imishini Yezimboni Ukusebenza "njll.
Thina BricMaker sikunikeza izixhobo zekhwalithi ephezulu nesisombululo sobuchwepheshe, ukukusiza ukuthi uthole izinzuzo ezinkulu kwezomnotho futhi ubone inani lakho lempilo!